IsiTshintsho sesithathu: Iimpembelelo zengqondo
"Akukho mkhosi oza kuthi, ngexesha loxolo libe liqela kuyo nayiphi na indlu, ngaphandle kwemvume yoMnikazi, okanye ngexesha lokulwa, kodwa ngendlela echazwe ngumthetho."
IsiTshintsho sesithathu kuMgaqo-siseko wase-US usikhusela abemi baseMelika ukuba banganyanzelwanga ukusebenzisa amakhaya abo ukuba bakhonze amalungu aseMelika. Isilungiso asinweli ilungelo elifanayo kubemi baseMelika ngexesha leemfazwe. Ukubaluleka komthetho kuncipha kakhulu emva kweMfazwe yaseMelika kunye neyona nto ibaluleke kakhulu kwi-21 Century.
Ngethuba leMelika yokuVuquka, iikholoni zazihlala ziphoqelelwa ukuba zisebenzise amasosha aseBrithani kwipropati ngexesha leemfazwe noxolo. Ngokuqhelekileyo, abo baqolonti babeza kufumana ukuba baphoqelelwe ukubeka kunye nokutya zonke iirhulmenti zeNkundla, kwaye amajoni awazange abe ngamaxesha onke ezindwendwe ezilungileyo zendlu. Isiqendu III soMthetho osaYilwayo wamaLungelo senziwe ukuba siphumelele umthetho osikhathazayo waseBrithani, owaziwa ngokuba ngumThetho wokuQoqa, owawuvumela le ndlela.
Ngenkulungwane ye-20, nangona kunjalo, amalungu eNkundla ePhakamileyo yase-United States abhekisele kwiNguqulelo yesiThathu kwiimeko zamalungelo angasese. Kwiimeko ezininzi zakutshanje, nangona kunjalo, izilungiso ze-Ninth kunye ne-Fourteen zikhankanywe ngokuphindaphindiweyo kwaye zisebenza ngakumbi ekukhuseleni amalungelo aseMelika ukuba abe yimfihlo.
Nangona ngamanye amaxesha umxholo wokugwetyelwa kwamacala amaninzi, kukho iimeko ezimbalwa apho iSilungiso sesithathu sidlala indima ebalulekileyo. Ngenxa yesi sizathu, ukulungiswa akuzange kube nomngeni omkhulu wokupheliswa.
Ukulungelelaniswa ngokuqhelekileyo, kunye nolondolozo lwezithethe, ngokukodwa, iSilungiso sesithathu lukhumbuza le nkqubela phambili yesizwe ngokuchasene neengcinezelo.
Indlela yokugqiba i-Degree yakho yeKholeji ngokuBhalisa kwiSikolo se-Inthanethi
Indlela Yokuthetha Intlekele ngesiTshayina
10 Iimfuneko Zokwazi Ulwazi Ngomhla Womhlaba
Ed Freeman, iMedal of Honor Respector